DVD ciyaaryahan aad u ciyaaraa saxanno, Tan ayaad ku ogaan hubaal, laakiin weligaa waxaad la Yaabteen runtii waxa ay samayn karaa? Magac ahaan, noocyada qaabab u ciyaari karaa? Bal aan eegno mid kasta oo ka mid ah qaabab kala duwan sida dhabta ah, iyo sida aad u xaqiijin karto in aad ciyaaryahan awood u yeelan doonaan in ay ku ciyaaraan.
Inta badan DVDs caadiga ah waa MPEG-2 qaab cajalladaha . Ciyaartoyda DVD Home sidoo kale caadi ahaan la ciyaari doonta AC-3 ama PCM cajalladaha audio. MPEG-2 waxaa kaloo loo yaqaan H.222 ama H.262. Kuwani waa noocyada riixo in ay ogolaanayaan video aad u nadiif ah iyo dhalmo audio iyo loo maqli karo. Thanks to ay qaybinta caadi ah, waxaad ka heli doontaa qaab this waxaa loo isticmaalaa si guud oo adduunka ah.
Si aad u hubiso in aad DVD ciyaari doono, hubi in barnaamijka DVD gubashadii aad leedahay doorasho ah in la abuuro DVDs in ciyaari karaa mashiinada guriga. Waa habka lagu magacaabo DVD qoraalka, iyo waxa ay ka caawisaa si loo hubiyo in DVDs runtii si sax ah u ciyaari doono. Tani waxay dhacdaa mahad software abuuro faylasha wax video in ciyaaryahan kasta DVD akhriyi doonaa sida menu, amarradiisa, iyo video / files audio in aad aragto shaashadda. (Ama maqlaan, in ay dhacdo audio ah.) Tani waxaa loo yaqaanaa qaab-dhismeedka buugga.
Video CD-yada, ama VCDs waa MPEG-1 riixo, video tayo leh ka hooseeya ah MPEG-2. Qaar ka mid ah ciyaartoyda DVD ayaa awoodi doona inuu ka ciyaaro kuwaas, iyo qaar ka mid ah xitaa waxay awoodi doonaan inay ku ciyaaraan cajalladaha macluumaadka DVD. Haddii aad leedahay fursad in la gubo si SVCD, sidaas la sameeyo, sababtoo ah waxa ay keeni doontaa in images tayo sare on your disc.
Ka sokow qaabab aasaasiga ah, waxaa jira haystaa sacab muggiis oo ciyaartoyda DVD caawin kara MOV, wmv, iyo WMA cajalladaha. Details ayaa online ciyaaryahanka ama sanduuqa waa inaad u sheegtaa haddii ay taageeri karaan mid ka mid ah.
DivX waa qaab kale oo gebi ahaanba, oo ku imanaya laba nooc. Waxaa jira DivX hore ka yimid ee bartamihii-1990 at dukaamada circuit City ay badal u tahay DVDs kirada. Markaas waxaa jira DivX cusub in uu yahay nooc ka mid ah qaab video. Laba ayaa waxaa lagu ma la xidhiidha, in kastoo ay wadaagaan magac la mid ah. New DivX kuu ogolaanaya in aad leedahay videos tayo sare leh ee yar yar size file a qol yar wadid aad u adag.
Ciyaartoyda Newer in la aqoonsado DivX qaab files si aad u dheer sida ay iyagu u leeyihiin AVI encoded iyaga ku samayn karto. Ciyaartoydan ka akhrisan kartaa noocyo kala duwan oo guud ahaan ka mid ah qaabab, oo ay ku jiraan DVD-yada macluumaadka iyo CD-yada macluumaadka. Movies badan oo soo bixi yimaadaan qaab DivX ah, sidaas darteed haddii aad hesho ciyaaryahan ka ciyaari kara in saxanno, waxaad gubi karaa files filim aad on your computer si disc is haysta iyo iyaga ciyaaro xarunta madadaalada guriga. Riixo waa sida in ay ku habboon doono CD ah, taas oo weli ka raqiisan yahay DVD faaruq.
DVDs Newer waa in H.264 ama MPEG-4 ee caadiga ah , inta badan loo yaqaan Blu-Ray . Tani waxay sidoo kale waa qaab ay isticmaalaan Lugood u filimada, iyo waxa laga heli karaa YouTube ee videos tayo sare leh. Warbaahinta HD badan oo shirkadaha cable iyo satellite waa in MPEG-4 iyo sidoo. Blu-Ray ciyaaryahan ka ciyaari kara DVD-yada, laakiin aad jidka ku wareegsan oo kale ma. Qaab video riixo Tani waa awood u gelinaya xaddi weyn oo xog ku saabsan cajalladaha gaar ah saxda ah inay isku qiyaas jirka sida DVD-joogta ah.
Waxa kale oo laga yaabaa in aad aragto MKV sida qaab - Tani waxay sidoo kale waa Blu-Ray, laakiin waa nooca aad yeelan doonto guri DVD gubay, ma ah mid ganacsi. MPV waa qaab caalami ah in ay awood u taabato xaddi badan oo data. Waxaa u furan qaab caadiga ah weel oo lacag la'aan ah, sidaas darteed waxaa si fudud looga qabsan kara waxa aad u baahan tahay inaad samayso.
Waxaa laga yaabaa inaad qabto qaar ka mid ah DVD-yada guriga abuuray in ay yihiin qaab AVI. Waxay ku xiran tahay DVD ciyaaryahan guriga, ama waxaa laga yaabaa in aysan garan laga yaabaa disc ah. Badankooduse wax ma doono haddii aan la soo wajihi doonta DivX.
Haddii faylasha aad leedahay on your computer aanay hore u MPEG-2, waxaad iyaga u ordi karaa iyada oo barnaamijka diinta si ay u geliyey qaab gaadhay. Qaar badan oo barnaamijyada qoraalka DVD this kuu samayn doonaa si toos ah. Marka aad ku shuban faylka barnaamijka, waxa ay u eegi doonaa waafaqsan, markaas bixiyaan si ay u badalo aad u. Tani waxay qaadan kartaa waqti ka mid ah, taas oo ku xiran ee faylka. Marka uu sameeyo, waxa uu mari kartaa inta kale ee habka abuurista disc ah, halkaas oo aad ku dari kartaa wixii qaab sida bedeley ama kala guurka ka hor intuusan bilaabin gubashadii laftiisa.
Qaar ka mid ah ciyaartoyda DVD guriga ciyaari doono cajalladaha rewritable, laakiin tani waa dhif. DVD + R ama DVD-R cajalladaha u badan tahay in la aqoonsado, oo ah labada, DVD + R waa mid ka mid ah oo la aqoonsan yahay adduunka ku dhowaad, xitaa ay ku ugu jaban ee ciyaartoyda DVD. Ciyaartoyda DVD dhamaadka Sare awood u yeelan doonaan in ay la tacaalaan WMA iyo MPEG-4 video saxanno, iyo jpeg sawir cajalladaha. Hadda, filimada aad ka Windows Media oo Lugood dib ciyaari karaa mashiinka gurigaaga. Nero isticmaalaa MP4 badan oo loogu talagalay heerka riixo ay, laakiin ma aha sida universal.
Cajalladaha Audio ayaa loo aqoonsan yahay ku dhawaad ​​dhamaan ciyaartoyda DVD, gaar ahaan haddii ay tahay .mp3 ama CD maqal ah, sidoo kale loo yaqaan CDA, cajalladaha .
Sidaas sidee baad ku garanaysaa, haddii ciyaaryahan DVD aad leedahay taageeri karaan mid ka mid ah noocyada kor ku xusan oo ah qaabab? Inta badan waxay yeelan doontaa logos labada sanduuq ama wejiga ciyaaryahanka, ama laga yaabo in labada, oo muujinaya doonaa waxa ay u ciyaaraan. Tusaalayaal inta badan tusi doono oo kaliya DVD iyo CD, laakiin kuwa cusub yeelan doontaa badan oo fursado dheeraad ah. Ciyaartoyda DVD Newer marar badan la feature upconversion qeexitaanka sare iyo sidoo kale. Tani waxay qaadan kartaa disc ah qeexidda joogto ah oo aad u eegto weyn on a TV qeexitaanka sare.
Dunida kombiyuutarada, xuruufta ugu sarreeya boqor noqday. Iyada oo daraasiin ka mid ah qaabab file halkaas, qaar ka mid ah kuwaas oo si fudud loo aqoonsan yahay iyo sida loo isticmaalo ka badan kuwa kale, waxay noqon kartaa wareer. Helitaanka software saxda ah DVD for your computer iyo ciyaaryahanka DVD saxda ah ee guriga si ay u qaado qarsoodiga ka mid ah geeddi-socodka by midaynta qaabab iyo samaynta waxyaabo labada fudud iyo ka badan socon.
> Resource > DVD > noocee ah qaabab ma ah DVD Player Support?